Ikhekhe lepheya, i-walnut nesinamoni, i-dessert esheshayo | Ukupheka Kwekhishi
Lapho kufika impelasonto ngihlala ngithola umzuzwana woku bhaka uswidi. Ngithola ukwaneliseka okukhulu ngokwenza kanjalo; Noma umphumela ungekho njengoba bekulindelekile, ukujabulela lowo mzuzu "wokuba wedwa" ekhishini kanye nokwehluka kwamakha okugcwala kuwufanele.
Namaphunga, lawo awanikezayo lapho kubhakwa ikhekhe elimnandi lepheya, ama-walnuts nesinamoni. Ikhekhe elinamanzi kakhulu, elimanzi kancane phakathi nendawo, lapho amapheya ewela khona, ama-walnuts afaka ukuthintana kwe-crunch nesinamoni, iphunga elimnandi. Yebo, niyazi ukuthi ngithanda isinamoni; Ngisanda kuyisebenzisa kulezi zinandi ama-chocolate scones Zizame!
56 amagremu ebhotela ekamelweni lokushisa
142 amagremu kashukela onsundu
1 iqanda elikhulu
120 amagremu kafulawa khekhe
1/2 isipuni sokupheka powder
1/2 isipuni sesoda yokubhaka
I-1 / 4 isipuni sikasawoti
50 amagremu ama-walnuts aqoshiwe
120 ml. ubisi lwebhotela (ungalwenza esibambo)
1 1/2 isipuni ushukela onsundu + 1/2 isinamoni
Ngaphambi kokushisa ihhavini ngama-degree angama-205 bese ugcoba isikhunta esingu-20-22 cm. Nebhotela.
Shaya ibhotela noshukela onsundu esitsheni kuze kube bushelelezi. inhlanganisela ebushelelezi nokhilimu. Bese ufaka i-vanilla neqanda bese uqhubeka ushaya uze uhlangane.
Kwesinye isitsha, Hlanganisa ndawonye ufulawa, i-baking powder, i-baking soda, isinamoni, nosawoti. Faka le ngxube kokudlule ezingxenyeni ezi-3, ukushintshanisa lokhu nobisi lwebhotela; Zisize ngesipuni sokhuni ngalokhu.
Okulandelayo, engeza uhhafu wama-walnuts oqoshiwe bese uvusa ingxube.
Thela ingxube kwisikhunta esigcotshisiwe. Ikhasi bese usika amapheya zibe izingcezu bese uzibeka enhlama-kwenze ngendlela ehlelekile ukuze zisatshalaliswe kahle.
Ekugcineni, ufafaze ingxube kashukela nesinamoni kanye ne amantongomane aqoshiwe esele.
Bhaka kuze kube semaphethelweni ekhekhe abe nsundu ngegolide, cishe imizuzu engama-20-25. Ukuhlola ukuthi isilungile yini, faka i-toothpick; uma iphuma ihlanzekile emaphethelweni futhi ine- some imvuthu ezimanzi phakathi nendawo, kuzoba isikhathi sokucima i-ovini.
Vumela ukuthi iqine kancane, ingabumbeki futhi khonza ufudumele noma ekamelweni lokushisa.
para yenza ubisi lwebhotela ekhaya Thela ama-250 ml obisi olufudumele esitsheni (kufanele ubeke umunwe kulo futhi ungazizwa ushisa) nge-15 ml. kalamula. Hlanganisa ingxube bese uyiyeka ihlale imizuzu eyi-10. Ngemuva kwaleso sikhathi izobe isilungele ukusetshenziswa. Ungesabi ukubukeka kwayo, ubisi "lusikiwe" kepha yilokho esikufunayo.
Imininingwane engaphezulu -ICinnamon Chocolate Chip Scones
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ama-Postres » Pear, isinamoni nekhekhe le-walnut, phaka okufudumele!
IMorenitos, ikilasi elilinga kakhulu